စက်တင်ဘာထာဝရ: မွတ်ဆလင် သောင်းကျန်းသူများ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ နောက်ဆုံးကျန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစုကို သတ်ဖြတ်
မွတ်ဆလင် သောင်းကျန်းသူများ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ နောက်ဆုံးကျန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစုကို သတ်ဖြတ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ငြိမ်သက်မှု မရှိသော တောင်ပိုင်း ခရိုင်တွင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု အနီး စောင့်ကြပ်နေသော ထိုင်းစစ်သား တစ်ဦး
Thailand (AFP) – Suspected Islamic militants shot and killedaBuddhist family of four at their home in the south of Thailand before dumping their bodies inaforest, police said Wednesday.
ထိုင်းနိုင်ငံ (AFP) - သံသယဖြစ်ဖွယ် အစ္စလမ္မစ် စစ်သွေးကြွများသည် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ နေအိမ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစု လေးယောက်ကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ် ခဲ့ကြသည် ဟု တောထဲရှိ ထိုသူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မမြှပ်နှံမီ ရဲများက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
၄၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား၊ ၃၃ နှစ် အမျိုးသမီး၊ ထိုသူတို့၏ သမီး ၁၆ နှစ်နှင့် ၇ နှစ်အရွယ် သား ယောက်ကျားလေး တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များကို အင်္ဂါနေ့ တွင် Yala ခရိုင်ရှိ မီးရထားလမ်း အနီး သစ်တော တစ်နေရာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Major General Chote Chawalwiwat said local people told the police they heard gun shots at the family's house in neighbouring Narathiwat province late on Monday, but were too afraid to go and investigate.
Major General Chote Chawalwiwat က ပြောကြားရာမှာ နယ်မြေခံ လူထုသည် တနင်္လာနေ့ နှောင်းပိုင်းတွင် Narathiwat ခရိုင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်တွင် ရှိသော ၄င်းတို့၏ နေအိမ်၌ သေနတ်သံများအား ကြားခဲ့ရသည်ဟု ရဲများကို ပြောပြခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနေရာသို့ သွားပြီး စုံစမ်းရန် ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြသည်။
“သူတို့တွေက အဲဒီရွာမှာ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိသားစုပါပဲ၊ ဒါကြောင့် စစ်သွေးကြွတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို အပြီးပြတ် ရှင်းထုတ်လိုက်ကြတာပါပဲ” ဟု သူသည် AFP ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
Fighting appears to have intensified recently:abomb attack in Yala province killed nine villagers last week and an unusually brazen attack by armed rebelsaweek earlier onamilitary base killed at least four soldiers.
လျှို့ဝှက် လှုပ်ရှားနေသော အစ္စလမ္မစ် သောင်းကျန်းသူများသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အစောပိုင်း ကတည်းကပင် မလေးရှားနယ်စပ် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်းတွင် ရက်စက်သော တိုက်ပွဲ တစ်ခုကို ဆင်နွဲကြပြီးပြီ။ မူဆလင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပါ သေဆုံးသူ ဦးရေ ၄,၄၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သော တိုက်ပွဲသည် Yala ခရိုင်တွင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုကြောင့် လွန်ခဲ့သော အပတ်က ရွာသား ကိုးယောက်ကို သေဆုံးစေခဲ့သည်။ စစ်တပ်အခြေစိုက် စခန်းတစ်ခုတွင်လည်း တစ်ပတ် အစောပိုင်းက လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများမှ ရက်စက်သော တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုသည် အနည်းဆုံး စစ်သားလေးဦး သေဆုံးစေခဲ့သည်။
"The militants have changed their tactics, focusing on making attacks more violent, rather than frequent, and targetting teachers and officials," the Thai prime minister said ataseminar.
Abhisit Vejjajiva added that his government still has much to do to stop the unrest.
“စစ်သွေးကြွတွေက သူတို့ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ ကို ပြောင်းလိုက်ကြတယ် ၊ ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ အာရုံပိုစိုက်လာတယ်၊ မကြာခဏ ဆိုသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ ရုံးအရာရှိတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားလာကြတယ်” ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့သည်။
Abhisit Vejjajiva သည် သူ၏ အစိုးရက ထိုသောင်းကျန်းမှုများကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်ကို လုပ်ရဦးမည် ဟု ထပ်ပြောခဲ့သည်။
စစ်တပ်ကို ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ယာအုပ်စုများ၏ အလေးထားစရာဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင်အများစု ဒေသ နေရာများကို ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်တွင် နောက်ထပ် သုံးလအတွက် အရေးပေါ် ဥပဒေ တိုးချဲ့သတ်မှတ် ခဲ့သည်။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 4:37 AM